Vundla ukuba uyimvumi, uBetusile uza kuwe | Ilisolezwe
Vundla ukuba uyimvumi, uBetusile uza kuwe
Iindaba / 20 April 2017, 02:00am / SITHANDIWE VELAPHI
NJENGOKUBA iphondo laseRhawutini lixhamla ubutyebi besimbiwa segolide, iMpuma Koloni yona izidla “ngegolide” enguvimba wentaphane yezakhono kwezomculo.
Oku kuthethwe yimvumi yegospile uBetusile Mcinga ngethuba esenza udliwano-ndlebe nephepha-ndaba I’solezwe.
Kungekudala uMcinga, ngokubambisana nendibanisela yolutsha olukwezoshishino iProgressive Youth in Business (PYB), uzakujikeleza iMpuma Koloni ekhangela izakhono zabo banomdla kushishino lwezobugcisa.
Ethetha emva kokuthabatha inxaxheba kwikonsathi ebibanjelwe eOrient Theatre eMonti, uMcinga uthe: “Umsebenzi esizawenza kakhulu kukukhangela italente, kuba sikholelwa ukuba abantu abaninzi abazenzele igama emculweni baphuma apha eMpuma Koloni.”
Noxa nje ezona ndawo kuza kukhangelwa kuzo le talente zingekabhengezwa, uMcinga uthi kuza kwenziwa ezilalini. “Neemvumi ezisakhulayo ziza kuxhamla kuba siza kuzipha iingcebiso nezakhono zoshishino kweli candelo lomculo. Oku kungokuba sifumanisa ukuba iimvumi ezininzi azinalwazi lungako malunga nezinto ezifana nezivumelwano ezityikitywa neenkampani zoshicilelo. Yonke le nto iye ikhokelele ekuqhathweni kwabo,” kutsho uMcinga.
UMcinga ukwathe bakwajonge ekuboniseni iimvumi zeli phondo ezisakhasayo amathuba akhoyo kweli candelo. “Aliqela amathuba ezoshishino kwezomculo, akuphelelanga ekuculeni kuphela. Ungangumlawuli weemvumi, uvelise umculo okanye ubenendawo yokushicilela,” kutsho uMcinga.
UMcinga uthi le mfundiswano azakuyenza nePYB uzakuxhamlisa zonke iinkalo zomculo, ayikhethanga candelo linye. “Nabe mixhentso, iimbongi okanye abazobi baza kuxhamla nabo,” utshilo.
Usihlalo wePYB eMpuma Koloni, uBuhle Tonise, uthi bagqibe kwelokusebenzisana noMcinga kuba ngomnye wabantu onabalandeli mbombo zone zelizwe.
“Enye into ebangele ukuba siqale eli nyathelo kukuba apha eMpuma Koloni sithe gqolo ukuba neemvumi ezikhalayo zisithi azihoywanga. Eyona nto siyifunayo kukuba iimvumi zeli phondo zibe nezakhono zoshishino kwicandelo lomculo,” utshilo uTonise.
UTonise uthi iPYB incedisa ulutsha osele lukwezoshishino ngezakhono.
Uthi umceli-mngeni waseMpuma Koloni kukuba ushishino olugxeleshwe lulutsha lolo lusuka kurhulumente.
“Ayifanelanga ukuba injalo lo nto, kufuneka sinabise izakhono zethu kwiinkalo zonke,” utshilo uTonise.